अचम्म – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > अचम्म
Tag Archives: अचम्म
१७ वर्षीय युवकको शरीरमा एक किलोको पत्थरी !
क्लाउड पत्रिकाभदौ २२, २०७८
काठमाडौं । १७ वर्षीय युवकको शरीरबाट नरिवल आकारको एक किलोको पत्थरी निकालिएको छ । भारतको मुम्बईमा डाक्टरहरूले शल्यक्रिया गरी कलकत्ताका वासिन्दा रुबेन शेखको मूत्रथैलीबाट एक किलोको पत्थरी निकालेका हुन् । रुबेनको मूत्रथैलीमा जन्मदेखि नै एक्सट्रफी एपिस्पेडियाज कम्प्लेक्स (इइसी) नामक रोग एक लाखमध्ये एक जनामा हुने हुँदा यो निकै दुर्लभ रोग मानिन्छ । यस्तो समस्या भएको…
३०० फिट उचाईको ओछ्यानमा सुतेका मानिसहरु !
क्लाउड पत्रिकाभदौ ९, २०७८
काठमाडौं । अक्सर मानिसहरुलाई उचाईबाट तल हेर्दा चक्कर लाग्छ । अंग्रेजीमा यसलाई ‘हाइट फोबिया’ भनिन्छ, जसमा व्यक्ति उचाई बाट तल हेर्दा डराउँछन् । तर, के तपाइँलाई थाहा छ संसारमा यस्तो ठाउँ छ जहाँ मानिसहरु जमीनबाट लगभग ३०० फिटको उचाईमा ओछ्यानमा सुतेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा अहिले एउटा भिडियो भाइरल भैरहेको छ, जसमा दुई युवतीहरु जमीन…
ओलम्पिक गोल्ड मेडलमा कति हुन्छ सुन ? कति पर्छ मूल्य ?
क्लाउड पत्रिकासाउन २४, २०७८
काठमाडौं । टोकियो ओलम्पिकको आज अन्तिम दिन खेलाडीहरु यतिबेला ओलम्पिक्समा आफ्नो नाम इतिहासमा लेखाउन र साथै आफूसँग एउटा भए पनि ओलम्पिक मेडल घर ल्याउन अन्तिम प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । चाहे त्यो गोल्ड, सिल्भर होस् या ब्रोन्ज, ओलम्पिक मेडल भन्नासाथ सबै खोलाडीका लागि यो अत्यन्तै अमूल्य सम्पदा मानिन्छ । ओलम्पिक मेडलका डिजाइन हरेकचोटी फरक बनाइएका हुन्छन्…
हवाई जहाजका ५ रमाइला तथ्य जसले तपाईलाई चकित पार्नसक्छ !
काठमाडौं । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै पुग्नको लागि आजभोलि हवाईयात्रा निकै प्रचलित छ । पछिल्लो केही समययता नेपालमा पनि हवाई जहाजको यात्राले स्थान पाईरहेको छ । हवाई जहाजमा केही रमाइला तथ्यहरु छन्, जसले तपाईंलाई अचम्मित पार्न सक्छ । यस्ता छन् हवाईजहाजका ५ रमाइला तथ्यः हवाई जहाजको झ्याल किन गोलो हुन्छ ? तपाईंले याद गर्नु…
जहाज चढ्न कोरोना संक्रमितले श्रीमतीको रुप धारण गरेपछि….
Photo by : The Seattle Times ८ साउन, जकार्ता । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण संसारभर यात्रा प्रभावित भएको छ । जसले गर्दा अत्यावश्यक कामका लागि जानै पर्ने मानिसले समेत सास्ती भोग्नु परेको छ । यस्तै सास्तीका बीच इन्डोनेसियामा एक् व्यक्तिले हवाई यात्रा गर्न श्रीमतीको भेष धारण गरेका छन् । तर, उनको यो रहस्य उनकै छटपटीका…